Haircut - inqubo ebalulekile ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Ngokwesilinganiso, cishe nyanga zonke indoda ovakashela salon izinwele. Ugunda ngokuvamile kubiza ruble kungathi izingalo ezingamakhulu amabili, ukuze lumelele unyaka ekuvakasheni wezinwele kuzothatha cishe izingalo ezimbili nengxenye ayizinkulungwane. Ukuze songe imali, ungakwazi ukuthenga umshini ukuze izinwele. Lezi amadivayisi kulula ukusingatha, emsebenzini angadingi ethize amakhono athile. Izindleko imishini sehluka kakhulu. Musa ukhethe amamodeli ushibhile kakhulu we-Chinese futhi Korean, njengoba zibekelwe isikhathi esithile esifushane futhi zidinga esikhundleni njalo izingxenye.
Kahle kungase kutholakale izinzipho Izinwele ngokuqinile German Moser. I kakhulu funa imodeli emakethe Moser 1400. Lezi imigqa zenziwa ngokuqondile e-Germany. Izinga le mishini isesikhathini par. Zonke izinto zenziwa ngobuciko German. Blades ezenziwe ngensimbi ye-chrome engagqwali. Isiqinisekiso abakhiqizi ngoba Moser imodeli 1400 izinyanga 36, okuyinto kunalelo sewaranti ngenxa izinzipho kusuka kwamanye abakhiqizi. Ububi lezi amadivaysi ingashiwo isisindo sabo: ingaphezu 500 amagremu. Ezinye izindaba zika- Clipper Moser 1400 kunezinzuzo kuphela. ummese isevisi siphila iminyaka engaphezu kweyishumi ziqhubeka. Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa abanikazi, esikhundleni izindwani Kwenziwa emva kweminyaka 10-15 yesevisi, okuyinto impela high lezi amadivaysi. Le kit kuhlanganisa Moser 1400: umshini langempela, amakhanda amabili, ibhulashi ukuze bahlanze izindwani, namafutha Lubrication, Ukuvikelwa cap nokulaywa. Omunye Imibhobho esemzimbeni kufakwe kule sethi, ivumela ukulungiswa kanye nobude 4 kuya 18 mm, kanti owesibili - kusukela 0.1 kuya ku-3 mm. Abanye onobuhle ube isethi eyengeziwe sikelo kanye ikamu. Ubude obuncane lapho izinwele is sheared umshini Moser 1400 kuyinto 0.1 mm. Amandla kagesi livela amapayipi 220 volts. Ikhebula nge ipulaki lide ngokwanele futhi kwenza kube ukhululekile ukusebenza. Clippers Moser 1400 imibala zakudala ayatholakala: obomvu, omhlophe, omnyama, eziluhlaza kanye green. Umzimba omkhulu idivayisi has a indandatho ekhethekile, kungashiwo hung okuyiwona, ngakho-ke akuthathi isikhala kakhulu. Izihlahla kwenziwa isixwayisi.
Nge Moser e 1400 uzokwazi ukwenza haircuts professional ekhaya. Ukusebenza naye akunzima, kulula futhi kulula ukuyisebenzisa. On umzimba it has ukushintsha ezimbili kuphela: oyedwa amandla ngaphakathi nangaphandle kwe, kanti eyesibili ukuhambisa imimese. Enye plus izimoto Moser 1400 - kuyinto intengo yayo. Kuyinto ruble 1000-1500. Ngakho ukukhokha edivayisini izinyanga eziyisithupha nje. Ngokuvamile, izinzipho emakethe Moser izinwele Bebelokhu baziwa, cishe sekube undabuzekwayo. Ngaphezu amadivayisi ukusetshenziswa ekhaya, inkampani silwenza imishini ukuhweba, edging, trimmers. Kukhona umkhiqizo uchungechunge Moser Clipper izinja.
Moser inkampani emakethe izinwele salon umkhakha iminyaka engaphezu amahlanu. Phakathi naleso sikhathi kumelwe atholwe amakhasimende ayo njalo, ogama inombolo luyanda njalo ngonyaka. Ngemva Moser - ikhwalithi, ukuthembeka, service enhle futhi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Seductive - ke yilokhu? Meaning, omqondofana nezibonelo
Iphutha "Ayikwazanga ukuthola into." Indlela yokususa ifayela undeletable?